Awoodda R & D - Weifang Naipute Gas Genset Co., Ltd.
Kooxdayadu waxay ku hawlanaayeen R & D wax soo saarka tamarta gaaska muddo ka badan 30 sano shirkadaha Shiinaha ee caanka ku ah soo saarista mashiinnada;
Sannadkii 2000, oo uu hoggaaminayey oo uu dhammaystiray cilmi-baarista iyo horumarinta iyo suuq-geynta gaaska dhaliyaha noolaha, mashruuc caan ah oo ah halsano halsano ah oo ku dhex jira warshadaha taranta gudaha;
Sannadkii 2002, wuxuu hormuud ka ahaa oo uu dhammaystiray naqshadaynta, hawlgalinta iyo adeegga hawlgalka ee mashruuca soosaarida tamarta noolaha ee 3MW ee gudaha;
Sannadkii 2008. NPT ayaa la aasaasay oo la helay tiro ka mid ah rukhsadaha awoodda gaaska;
Ilaa hadda, guulo wax ku ool ah ayaa la gaadhay, waxay ka gaadhay guulo wax ku ool ah dhinaca awoodda gaaska gudaha;
Shirkadda NPT waxay leedahay injineero badan oo in ka badan 30 sano khibrad shaqo ka wada qaybta mashiinka gaaska iyo koronto-dhaliye
Kooxda R & D waxay fulin karaan naqshadeynta wax soo saarka gaarka ah iyo soo-jeedinta iyadoo la raacayo shuruudaha isticmaalaha;
Xisaabinta jilitaanka isugeynta;
Waxyaabaha muhiimka ah waxaa soo saaray 3D daabacan, taas oo si weyn u soo gaabinaysa wareegga R & D;
Mashiinka: in la dhiso xiriir wada shaqeyn istiraatiijiyadeed oo guuleysta oo lala yeesho soosaarayaasha matoorrada gudaha si wanaagsan looga yaqaan, samee cilmi baaris wadajir ah iyo horumarin, iyo soosaarida guddiga. Mashiinnada oo dhami waxay ka yimaadaan khadadka wax-soo-saarka ee soosaarayaasha matoorrada gudaha iyo shisheeyaha ee caanka ah;
Qaybaha muhiimka ah: iskaashi la samee hay'ado cilmi baaris oo badan, jaamacado, soosaarayaasha astaamaha caanka ah ee gudaha iyo dibaddaba si ay ula jaanqaadaan tikniyoolajiyadda mashiinka gaaska ee ugu horumarsan maanta, ayna doortaan oo ay ula jaan qaadaan qaybaha muhiimka ah ee adduunka oo dhan;
Mashiinka wuxuu qaataa nidaamka isku dhafka gaaska, nidaamka xakamaynta iyo nidaamka dabka oo si madax banaan loo naqshadeeyay loona hagaajiyay sumadda NPT. Mishiinku wuxuu leeyahay hawlo kala duwan sida gubashada khafiifka ah, shidida tamarta sare, xakamaynta saamiga hawo-shidaalka, xakamaynta culeyska xawaaraha, is-waafajinta iyo is-barashada.
Qalabka koronto-dhaliyaha ayaa leh shaqooyin badan sida is-beddelka tooska ah, isku xirka shabakadda, hawlgalka isbarbar socda, qaybinta culeyska, wareejinta gawaarida otomaatiga ah, iwm